खुशीको खबर ! चिनियाँ कम्पनीले सुरु गर्‍यो को’रोनावि’रुद्ध खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण ! – Sanchar Patrika
खुशीको खबर ! चिनियाँ कम्पनीले सुरु गर्‍यो को’रोनावि’रुद्ध खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण !
July 16, 2020 171
१ असार, काठमाडौं । चिनियाँ फर्मा कम्पनी सिनोफर्मले को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) वि’रुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरेको छ । कम्पनीले यूएईको आबुधाबीमा १५ हजार स्वयंसेवकहरुमा यो खोपको परीक्षण सुरु गरिएको आबुधाबीको स्थानीय सरकारले जानकारी दिएको छ ।
को’रोना भा’इरसवि’रुद्धको खोपको मानव परीक्षण सिनोफर्मको चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप, आबुधाबीको कृत्रिम बौद्धिकता र क्लाउड कम्युटिङ कम्पनी ग्रुप ४२ (जी४२) र आबुधाबीको स्वास्थ्य विभागको सहकार्यमा भइरहेको हो ।
बुधबार खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कोभिड–१९ को कुनै खोपले अनुमति पाएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का अनुसार अहिले २३ को’रोना वि’रुद्धको खोपको मानव परीक्षण सुरु भइसकेको छ । जसमध्ये तीनओटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षण सुरु गर्ने तयारीमा वा परीक्षणको क्रममा छन् ।
अहिले सुरु भएको परीक्षणमा स्वयंसेवकहरुलाई खोपको पहिलो डोज दिएको तीन सातापछि दोस्रो डोज दिइने यूएईको कोभिड–१९ क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट कमिटीका प्रमुख नवाल अल्काबीले बताए । यूएईमा दुई सय विभिन्न मुलुकका मानिसहरुको बसोबास रहेका कारण सिनोफर्मले आफ्नो परीक्षणको लागि यूएई छनोट गरेको हो । सिनोफर्मले यसअघि गरेको पहिलो र दोस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा शतप्रतिशत स्वयंसेवकहरुमा २८ दिनमा को’रोना भा’इरसवि’रुद्धको एन्टिबडी विकास भएको बताइएको छ ।
चीनमा को’रोना भा’इरसका सक्रिय सं’क्रमित निकै कम भएको कारण चिनियाँ कम्पनीले अन्य मुलुकमा को’रोना भा’इरसवि’रुद्धको खोपको परीक्षण गरिरहेका छन् । अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनाभाक बायोटेकले ब्राजिलमा को’रोनाभा’इरसवि’रुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण गरिरहेको छ ।
Prevभयंकर विस्फोट हुँदै तीव्र वेगमा उछिट्टियो एउटा तारा : खगोलशास्त्री
Nextदुनियाकै अनौठो गाउँ, जहाँका सबै युवतीहरु कुमारी छन् !
भुसको आगो झै फैलिदै कोरोना आज मात्रै यति धेरैमा कोरोना संक्रमण देखियो हेर्नुहोस विवरण ?
यी १८ सूत्रः जसले तपाईलाई जवान देखाउछ !